iPhone 6s Plus Ndi Apple ga-achi na ire ahia? | Gam akporosis
iPhone 6s Plus Ndi Apple ga-achi na ire ahia?
Cristina Torres ebe a oyiyi | | Noticias
Apple kpughere na ihe omume ya ụnyaahụ ihe ga-abụ saga ọhụrụ iPhone. Ndị a bụ ụdị iPhone 6s na iPhone 6s Plus. N'ihe banyere nke kachasị ukwuu, ọ bụ ọgbọ nke abụọ nke phablets nke ụlọ ọrụ apụl na-enye n'ahịa yana atụmatụ ndị ọ na-abịa, ọ nwere ike ịbụ onye na-ama aka iji dakọtara ọtụtụ njedebe gam akporo ndị dị adị. Ọ bụ ezie na enweghị nnukwu ndozi na imewe ahụ, nke na-anọgide na-apụ n'anya, iji chọpụta ihe nwere ike inye uru ịsọ mpi ị ga-abanye n'ime. Want chọrọ chọpụta iPhone 6s Plus n'ime?
Nke a bụ tebụl nwere isi iPhone 6s Plus atụmatụ ya mere i nwere ike iji ya tụnyere ihe ndị ọzọ ọnụ na gam akporo ahịa na-enye. N'ọnọdụ ọ bụla, lekwasị anya na Androidsis n'ihi na ụbọchị ndị a, anyị ga-ebipụta nyocha nyocha na isi ọnụ na ahịa. Echefula ha!
1 Akụkụ nke iPhone 6s Plus
2 iPhone 6s Plus: Ọchịchị Apple
Akụkụ nke iPhone 6s Plus
Nlereanya iPhone 6s Plus
Usoro njikwa iOS 9
RAM 2GB (atụmatụ)
Nchekwa n'ime site na 16GB
Igwefoto na-aga n'ihu 12MP
Igwe n'ihu 5MP
Njikọ Enwekwukwa LTE na ogologo oge WiFi
Atụmatụ ndị ọzọ New aluminom na ụlọ. Nkwalite igwefoto na nnweta na agba ọla edo
Batrị Enweghị ozi
Ibu ibu Enweghị ozi
Ahịa Site na euro 709 na Europe
iPhone 6s Plus: Ọchịchị Apple
Otu n'ime ọghọm anyị na-ahụ na iPhone 6s Plus atụmatụ ekpugheworị, ekwesịrị ịdeba na RAM agaghị abụ ụdị ọ bụla a na-enye site na njedebe dị elu na ahịa gam akporo. Kedu ihe ọzọ, ọ bụ ezie na amabeghị data ahụ, ọ nwere ike ịdị na 2GB. N'agbanyeghị nke ahụ, site na iji akụkụ dị iche iche na sistemụ arụmọrụ dị iche iche na-agba ọsọ, ekwesịghị ịhụ nke a dị ka ọghọm. Mana ọ bara uru ikwu, karịsịa maka ndị na-atụle nọmba n'etiti ọdụ A na ọzọ B na, site n'ebe ahụ, na-eme mkpebi.
N'aka nke ọzọ, maka ndị nwere iPhone, dịka ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ọ na-eme mgbe niile na nsụgharị etiti, enweghị mgbanwe ndị isi. A na-eji casing mee ihe mkpuchi ahụ, na-eguzogide ọgwụ karị, mana anya anaghị ahụ ya anya. Naanị isi na usoro nke imewe bụ agba ebe ọ bụ na iPhone 6s Plus bụ nke mbụ na-enye pink hue. O doro anya na Apple na-achọsi ike inweta ụmụ nwanyị na-ege ntị, ọ nwere ike ịbụ na ọ merụrụ akara ahụ.
Ọganihu kachasị ama ama nke na-eti mkpu bụ nke metụtara igwefoto. The iPhone 6s Plus na-enye igwefoto emegharịrị ka ihe ọ na-enye na atụmatụ ndị ọzọ. Ma na nloghachi, n'ihi agha ego, anyị na-ahụ na ọnụahịa ahụ dị elu n'ezie ma e jiri ya tụnyere ihe ahịa na-enye. N'ezie, ọha Apple ejiri ya ya na nke ahụ aghọbeghị nsogbu maka ahịa ịga n'ihu.
Na ihe a niile, echere m na Apple kere ọnụ na ndị nwe iPhone ugbu a na-enye ha ndozi nke ahụ nwere ike ịkwụ ụgwọ ha ma ọ bụrụ na ha bụ ezigbo ụmụ nwoke. N'otu oge ahụ, ọ na-atụrụ anya na ụmụ nwanyị na-ege ya ntị na pink hue, na-ewepụ ọla edo site na ụdị ndị ọzọ iji mee ka ọ bụrụ naanị agba maka iPhone 6s Plus na obere ya. Site na atụmatụ ndị a niile, ekwenyere m na ahịa nke iPhone ọhụrụ ga-adị elu.
- Mma esịtidem uru
- Agba ọhụrụ dị
- Igwefoto nwere ọtụtụ ọrụ na mkpebi dị mma
- Ọnụahịa dị oke elu na Europe
- Enweghi mgbanwe ndi isi
- A naghị atụ anya ihe nchekwa RAM dị ka ahịa si dị
Nyochaa: Cristina Torres ebe a oyiyi
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » iPhone 6s Plus Ndi Apple ga-achi na ire ahia?
Nke a dị ka isiokwu gị .... n'agbanyeghị, ị kwere nkwa na aha ahụ wee nwee ihe ọ bụla ma anwụrụ ọkụ
Zaghachi Alberto Estefania Biedma
Nkọwa: Apple iPhone 6s Plus VS Samsung Galaxy Note 5
Samsung Galaxy S7, mbụ asịrị banyere ya ngosi na oru nkọwa